घामले छाला डढाएको छ ? काँक्रो बन्छ उपयोगी ! – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, १५ श्रावण बुधबार १७:३२
एजेन्सी, काठमाडौं। जुनसुकै समयमा पनि सलादको रुपमा प्रयोग गरिने फल हो काँक्रो । प्रशस्त मात्रामा पानी पाइने हुँदा काँक्रो गर्मी समयमा अझ बढी रुचाइन्छ । घरदेखि रेस्टुरेन्टसम्म यो सलादको रुपमा प्रयोग गरिँदै आइएको छ ।
महिनावारीको गडबडी हुने महिलाहरुका लागि पनि काँक्रोको सेवन लाभदायी हुन्छ । काँक्रोलाई टुक्रा बनाएर दहीमा बिरे नुन, मरिच, जिरा, पुदिना आदि मिसाएर खाँदा महिनावारी नियमित हुनुका साथै महिनावारीका बेला हुने दुखाइ पनि कम गर्ने गर्दछ ।
PREVIOUS Previous post: रक्तअल्पतादेखि कब्जियतबाट छुटकारा पाउन खानुहोस हरियो मकै
NEXT Next post: काठमाडौँका सडकमा अब शौचालय खोज्दै भौतारिनु नपर्ने
भोलि १० बजेपछि रबि लामिछाने छुट्दै ! वकिलले भने ‘गल्ति सालिकरामकै छ’ 3,715 views